निर्मलाको हत्याकाण्डमा गहिरो गरी तानिदै ओली सरकार – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
निर्मलाको हत्याकाण्डमा गहिरो गरी तानिदै ओली सरकार
प्रकाशित मिति : २०७५ मंसिर २१
काठमाडौं । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको हत्यारा अहिलेसम्म पत्ता नलागेपछि ‘सरकार भेटियो, तर न्याय भेटिएन’ भन्ने पोष्टर देशभर टाँगिएका छन् । विजुलीका खम्बाहरुमा पोष्टरहरु टाँगिइन्छ, प्रहरीले ती सबै च्यात्दै जान्छ । निर्मलाको हत्याराको खोजीसँगै गृह प्रशासनले बनाएको ‘जनतासँग प्रहरी अभियान’ अहिले उनै निर्मलाको न्यायको माग गर्दै फोटो छापिएको पोस्टर च्यात्न परिचालन गरिएको छ । यसले देखाउँछ– निमला हत्या प्रकरणमा ओली सरकार गहिरो गरी मुछिदै जान थालेको संकेत ।
प्रहरी प्रशासन निर्मलाका हत्यारा सार्वजनिक गर्न नसकेको कमजोरी लुकाउन देशव्यापी ‘पोष्टर’ च्यात्ने अभियानमा जुटेको छ । निर्मलाको न्यायका लागि देशव्यापी चलेको पोष्टर आन्दोलनबाट गृहप्रशासन त्राहीमाम भएको देखिन्छ ।
भेजिनल स्वाब नै पठाएको छैन
प्रमाणहरु सबै नष्ट गरिसकेपछि पठाइएको भनिएको ‘भेजिनल स्वाब’ नभएको कुरा प्रमाणित हुन आएको छ । सारा प्रमाण योजनाबद्ध रुपमा नष्ट गर्ने स्थानीय प्रहरी प्रशासनले उक्त वैज्ञानिक प्रमाण पठाउने त कुरै भएन । तर हालसम्म हुँदै नभएको यही कुरालाई रहस्यमय बनाएर जनताका आँखामा छारो हाल्न यो सरकारको गह प्रशासन लागि परिरहेको छ ।
प्रोक्सी प्रमाण र डमी फिगर
गृह प्रशासन अहिले प्रोक्सी प्रमाणको हल्ला गर्दै डमी फिगर निर्माणका लागि रातदिन लागि परेको देखिएको छ । यसले पछिल्लो पटक एकजना युवालाई काठमाडौंमा गिरफ्तार गरिएको पनि बताएको छ । यसभन्दा अघि दिलिपसिंह बिष्टलाई पक्राउ गरेर चरम यातना दिई निर्मलाको बलात्कार र हत्या स्वीकार गर्न लगाए पनि स्थानीय जनताले उनी निर्दोष भएको बताए पछि छाडिएका थिए । तर एक निदोष नागरिकलाई सरकार र राज्यका तर्फबाट त्यति ठूलो यातना दिएर पनि अहिलेसम्म कुनै क्षतिपूर्ति दिएको छैन । नचाहिने गरी नागरिकहरुको गिरफ्तारी र यातनाका भरमा बोलकबोल गर्न लगाउने छुुट सरकार र राज्यलाई छैन ।
के प्रहरी सरकार गिराउने र बनाउने माफियाको चंगुलभित्र छ ?
अझ गम्भीर कुरा त के पनि खुल्दै जान थालेको छ भने गृह प्रशासन नै सरकार गिराउने र बनाउने माफियाहरुको चंगुलमा फसेको त छैन ? होइन भने प्रमाण नष्ट गर्न स्थानीय प्रहरी आफै किन त्यति बिघ्न लागि परेको थियो ? आफैले प्रमाण नष्ट गर्नु र अहिले अनुसन्धानका नाममा ‘डमी’ खोज्दै र सिंगार्दै हिंड्नु राज्य र सरकारका लागि सुहाउने कुरा होइन । यो भन्दा गल्ती स्वीकार गर्नु र माफि माग्नु धेरै बेस ।
तथ्यका आधारमा अनुसन्धान जारी राखोस्
यदि प्रहरीले यो काम गरिसक्ने वा गरेर देखाउने भनी चाहेको छ भने निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणलाई बाँकी रहेका भनिएका तथ्यहरुका आधारमा जारी राखोस् । तर निर्मला पन्तको वारेमा डीएन्ए, भेजिनल स्वाब आदिजस्ता प्रमाण नै नष्ट गरिएका कुराहरुको हल्लाखल्ला गरेर अन्यत्र मोड्ने दुष्प्रयास नगरोस्